Izindatshana zikaSteve Kremer zivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge USteve Kremer
USteve uzichaza "njengezwe elincane, i-rock-n-roll encane" njengobuchwepheshe kanye nomthengisi. Ushiye i-WISH-TV emuva ngo-1995 ukuba abe ngomunye wabakhi nabaxhumanisi bokuqala be-Indy. Endleleni wayesebenzela iziqalo ezibandakanya iProperty.com, iNarrowline, i-OneCall Internet, Vontoo futhi ChaCha ubekephi umqashwa # 4 futhi njengamanje unguMqondisi KaChaCha Of Online Advertsing.
Phuma ungaxhunyiwe ku-inthanethi, ungaxhumi, okungenani isikhashana
ULwesine, April 15, 2010 ULwesibili, April 1, 2014 USteve Kremer
Ngaqala ukungena ku-inthanethi futhi ngathola ikheli lami le-imeyili lokuqala ekuqaleni kuka-1995. Ngasekupheleni kuka-95 ngaqala ibhizinisi lami lokwakha iWebhu. Ukuba nenkampani yami kusho ukuthi ngiku-inthanethi futhi ngitholakala kumakhasimende ami ngaso sonke isikhathi. Ngangihlale ngixhunyiwe. Ngisho naseholidini ngilethe ilaptop yami ye-NEC manje. Ngokuhamba kwesikhathi ngajoyina iziqalo ezahlukahlukene. Noma kunjalo lapho eseholidini bekulindelwe ukuthi ngisebenzise okungenani ezinye
Ungabi isisulu se-Advertising Malware
NgoLwesine, ngoMashi 18, 2010 NgoLwesine, ngoMashi 18, 2010 USteve Kremer
I-imeyili iyangena. Uyajabula. Kuyisivumelwano se-CPM esiphakeme kakhulu esivela kumkhangisi omkhulu wegama lomkhiqizo. Awulazi ikheli le-imeyili lomthumeli. Uyazicabanga: “Hmmn..exampleinteractive.com. Kumele kube isitolo esincane esisebenzisanayo esisetshenziswa ngumkhiqizo omkhulu ”. Uthumela emuva i-imeyili ucela i-IO yabo (i-Insertion Order) bese uqala ukubuka uhlu lwakho lwezikhangiso olutholakalayo. Uya emuva naphambili nabo, banesifiso sokuthola